ARDAYDA SOMALIYEED EE DHIGATA JAAMACADDA KARACHI UNIVERSITY EE DALKA PAKISTAN AYAA CASHO SHARAF U SAMEEYAY MADAXDA SAR SARE EE JAAMACADDA.
Xaflad si aad ah loo soo agaasimay oo ay soo qaban qaabiyeen ardayda Somaliyeed ee wax ka barata jaamacadda Karachi University ee dalka Pakistan ayaa hamaynimadii arbacadii la soo dhaafay waxa ay ka dhacday guriga martida ee Jaamacadda Karachi University.
Xafladaan oo ahayd tii ugu horaysay oo ardayda somaliyeed ee wax ka barata dalkan Pakistan ku martiqaadaan macalimiintooda, ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxda sar sare ee jaamacadda Karachi University sida hormuudka jaamacadda Prof. Dr. Pirzada Qasim Raza Siddiqui, la taliyaha ardayda ajaanibta ah Prof. Dr. Kaleem Raza Khan, la taliyaha guud ee ardayda Dr. Khalid Iraqi iyo dadkale oo fara badan.
Xafladan oo ahayd mid si la yaableh la isugu soo duba riday ayaa sidoo kale waxaa ka soo qayb galay macalimiin fara badan oo kala kala yimid qaybaha jaamacaddu ka koobantahay . hadaba Intii lagu guda jiray xafladaan ayaa ardayda somaliyeed waxay abaal marin guudoonsiiyeen qaar badan oo ka mid ah madaxda jaamacadda sida, hourmuudka jaamacadda Prof. Dr. Pirzada Qasim Raza Siddiqui VC, la taliyaha ardayda ajaanibta ah Prof. Dr. Kaleem Raza Khan, Xoghaynta Hostelka Wiilasha, Syed Jamsheed, maamulihii hore ee Hostelka wiilasha Prof. Dr. M. Iqbal, maamulaha hadda ee Hostelka wiilasha. Dr. Zafar Iqbal, iyo kuwa kale oo fara badan.
Abaal marintaas ka dib ayaa madaxda jaamacadda laftoodu waxay abaal marin taas la mid ah gudoonsiiyeen qabanqaabiyayaashii xaflada. Waxayna ooga mahadceliyeen sida sharafta leh ee ay u soo qaban qaabiyeen xafladan ayagoo gudoonsiiyay shahaadooyin ay ku saxiisanyihiin madaxda sar sare ee jaamacadda Karachi.
U jeedada xafladaan ayaa ahayd is barasho dhex marta ardayda somaliyeed ee wax ka barata jaamacadda Karachi University iyo madaxda sar sare jaamacadda waxaana intii ay socotay xafladaan ardaydu halkaas ku soo bandhigeen waxyaabo badan oo kala duwan, waxaase xusid mudan riwaayad ay halkaas ku soo bandhigeen ardaydu oo ka hadlaysay dhibka uu la kulmo ardayga somaliyeed marka uu ku cusubyahay wadankaan iyo faa iidada uu gaaro markuu dhamaysto wax barashadiisa. Riwayadan oo ahayd mid si aad ah looga helay ayaa ardaydu ku soo bandhigeen dhaliilo iyo amaano is garab socda oo ay u jeedinayeenn jaamacadda Karachi University.
Madaxa guud ee jaamacadda Karachi University Prof. Dr. Pirzada Qasim Raza Siddiqui oo halkaas hadal ka soo jeediyay ayaa u mahadceliayay ardayda Somaliyeed wuxuuna sheegay in xafladaan ay ahayd mid si wanaagsan loo soo agaasimay wuxuuna sidoo kale sheegay in ardayda Somaliyeed Pakistan u tahay dalkoodii labaad uuna u aqoonsanyahay ardayda somaliyeed inaysan ahayn ajaanib balse ay yihiin ama ay la midyihiin dadka Pakistanta ah.
Mr. Siddiqui wuxuu intaas raaciyay inuu fahmay dhaliilaha ay tabanayaan ardayda Somaliyeed wuxuuna goobtaas ka sheegay balanqaadyo badan oo uu wax oogu qabanayo aradayda waxaana hadaladiisii ka mid ahaa � hadaan nahay madaxada jaamacadda Karachi University waxaan jecelnahay inaan soo diyaarino xaflad aan u qabanayno ardayda Somaliyeed ee wax ka barata jaaamacadda Karachi dhamaadka bishaan barakaysan ee Ramaddan hadii Alle idmo waxaana rajaynaynaa inaan idiin samayno wixii aad u baahatihiin oo daruuri ah�.
Mr. Maxamed C/raxiim (Shariif) oo ah arday hadda ka qalin jabiyay jaamacadda Karachi kuna hadlayay magaca ardayda wax ka barata jaamacadda Karachi University ayaa u mahad celiyay, maamulka, macalimiinta iyo dhamaan dadka reer pakistan oo uu ku sheegay inay si wanaagsan ula mucaamileen dadka Somalida ah iyo waliba dadka ajaanibta ah dhamaan ugu danbayntii Mudane SHarif wuxuu hadalkiisa ku soo gaba gabeeyay pakistan waxay ay u qabatay dadka somaliyeed inay tahay wax aan la hilmaami Karin wuxuuna u dar daarmay ardayda somaliyeed inay ka soo bixi doonaan kaalintooda wax barasho.
Dhanka kale xafladaan oo ahayd mid aad u bilicsan sifiicana looga soo shaqeeyay ayaan wax ka waydiiyay qaar ka mid ah qaban qaabiyayaashii cidda ka gacan siisay qarashkii ku baxay xafladan waxayna ii sheegeen ardayda dhexdoodu inay iska aruuriyeen qarashkaan balse waxay mahadcelin balaaran oo gaar ah u jeediyeen Mudane Axmed Abdi Osman oo ah masuul ka tirsan Shirgada AL-Mutaqbal oo kaalin libaaxleh ka qaatay qabsoomidii xafladaan.
Jaamacadda Karachi University ayaa ka mid ah jaamacaddaha ugu waa wayn jaamacaddaha dowliga ah ee dalkaan Pakistan waxaana la aas aasay jaamacaddan sanadii 1951. hadaba jaamacaddan oo ka koobanta 58 qaybood ayaa waxaa wax ka barta arday fara badan oo Somali ah oo ka kala yimid Afrika, Yurub, iyo America, waxaana ardaydaan dhigtaan qaybaha ugu sar sareeya ee jaamacaddan. Si kastaba ha ahaatee jaamacaddan oo ah jaamacad caan ka ah gudaha dalkan Pakistan iyo dibadaba ayaa waxaa wax ka barta arday fara badan oo kala yimid wadamo kala duwan oo caalamka ah sida, Somalia, Sudan, Uganda, Turkish, Malaysia, Oman, Saudi Arabia, Kuwait, iyo wadamo kale oo fara badan waxaana ardadyda somalidu noqdeen kuwiii ugu horeeyay oo xaflad sharaf u sameeya madaxda sar sare ee jaamacaddan Karachi.